Fananana tarehimarika mitombona sy vaovao Manampy ny fanjakana amin’ny fanapahan-kevitra raisina
Fahaizana mitantana eran-tany Nahazo ny toerana voalohany ny CNaPS
Ny fandinihana ny tantaran’ireo firenena matanjaka na koa olo-malaza eran-tany sy tafita teo amin’izay nifotorany no niaingan’ny fianarana ny fahaizana mitantana.
Fikambanana TAMIA Ho avy tsy ho ela ny zaikabem-pirenena
Tao anatin’ny fiarahabana ny vahoaka Malagasy nataony izay nampitainy tamin’ireo mpanao gazety tafaresaka tamin’izy ireo teny Antanimena ka nilazan’ny filohany, Randriamahefa Benjamina ny hoe :
Fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara Lava loatra ny lalam-bola
Miainga amin’ny fandraisana sy ny fampiharana ny andraikitry ny fanjakana ihany ny fahatanterahan’ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy ny mpahay lalàna momba ny fitantanam-bola, Fanahimanana Tiaray.
Andro iraisam-pirenena ho an’ny statistika omaly 22 novambra ary nankalaza izany i Madagasikara tetsy amin’ny Solimotel Anosy. Ezahina ampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy indrindra ireo tarehimarika marobe vaovao sy efa vita fanadihadiana ao amin’ny ivontoeram-pirenena momba ny Antontanisa (Instat).
Nisy araka izany ny fampiratiana tarehimarika maro be ka anisan’izany ohatra ny fivoaran’ny tahan’ny kolikoly, ny tontolon’ny fanabeazana eny hatramin’ny fandriam-pahalemana. Tsiahivina fa misy ny lalàna 2018-004 izay manasazy ny olona manome vaovao diso na tarehimarika tsy mitombona ka miteraka olana sy mandiso ny fanapahan-kevitra raisin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny eto amin’ny firenena. Nanambara ny minisitry ny toekarena sy ny teti-pivoarana, Napetoke Marcel Arsoanaivo fa zava –dehibe ary tena misy ny fitazomana ny tsiambaratelon’ny orinasa n any olon-tsotra manome vaovao sy tarehimarika ao amin’ny Instat. Amin’izao dia misy mihitsy ny ezaka ataon’ny Instat amin’ny fanarahana ny fomba manaraka ny kalitao ahafahana manana sy mitazona tarehimarika marina sy mitombona ka mirindra tsara amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ny fitondram-panjakana amin’ny lafiny maro. Ankoatr’izay dia tena ilaina ny ihany koa ny fananana antontanisa vaovao sy marina satria ireny ihany no fakafakaina sy hamarinin’ny mpamatsy vola ka mahatonga azy hanome na hand any famatsiam-bola ataony. Tena manampy be amin’ ny fanaraha-maso atao amin’ny asam-panjakana ihany koa ny antontanisa omen’ny Instat tahaka izao satria naranty tao avokoa ny tarehimarika tsara ho fantatra manodidina izany.